မမေ့နိုင်သော နေ့တစ်နေ့ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » မမေ့နိုင်သော နေ့တစ်နေ့	3
Posted by Ko chogyi on Jul 17, 2012 in Creative Writing |3comments
ဟိုး….အရင်လွန်ခဲ့သော ကျွန်တော်၏ ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘ၀
မမေ့နိုင်တဲ့နေ့လေး တစ်ရက်ကို ပြန်သတိရမိတယ်
အဲဒီနေ့က ပတ်ဝန်ကျင်တစ်ခွင်လုံး အုံအုံ့မှိုင်းမှိုင်းနဲ့
မိုးသားတိမ်ရိပ်တွေကလဲ မဲညို့ပြီး အာကာတစ်ခွင်လုံး
မိုးကလည်း ရွာမယ်ဆို သည်းသည်းမဲမဲ ရွာမချဘဲ
ကလေးငယ်တစ်ယောက် တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးတဲ့ အရုပ်ကလေးတစ်ရုပ်
ပျောက်သွားတဲ့အခါ ၀မ်းနည်းပူဆွေး တမ်းတပြီး တအီအီနဲ့
ရှိုက်ကာရှိုက်ကာ ငိူကြွေးနေသလို တစ်စိမ့်စိမ့်နဲ့ တဖွဲဖွဲ ရွာနေတယ်လေ
အဲဒီလိုအချိန်မှာပဲ စူးရှထိတ်လန့်ဖွယ် ဥသြသံစူးစူးကိုကြားလိုက်ရတော့
မိုးထဲရေထဲ ဘယ်ကများမီးလောင်ပါလဲလို့ စဉ်းစားနေတုန်း
‘’ ညီလေး ဘာလုပ်နေတာလဲ မြန်မြန် မတ်တပ်ရပ်လေ” ဆိုတဲ့
ကျွန်တော်အစ်ကိုရဲ့ အလော်တကြီး ပြောဆိုသံကိုကြားတော့
ကျွန်တော်လည်း ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ ထရပ်လိုက်ပြီး
ကျွန်တော်အစ်ကို ကို ငေးကြည့်မိတာပေါ့။
ဥသြသံတွေ စဲသွားတော့မှ အစ်ကိုကြီးဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးမိတယ်။
ညီလေးရေ အဲဒီဥသြသံတွေက မီးလောင်တာမဟုတ်ပါဘူး
“ အစ်ကိုကြီးတို့ အမိနိုင်ငံတော်ကြီးကို နယ်ချဲ့ကိုလိုနီတွေ၊ ကူညီချင်ယောင်
ဆောင်ပြီး ဂုတ်သွေးစုပ်အမြတ်ထုတ်၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့
တိုင်းတပါးသား အင်္ဂလိပ်နဲ့ ဂျပန်တွေကို အမိမြေပေါ်ကနေ မောင်းထုတ်ပြီး
လွတ်လပ်ရေးကို အရယူကာ နိုင်ငံအကျိုးကို ကိုယ်ကျိုးမရှာ စွန့်လွှတ်စွန့်စား
ခဲ့တဲ့ ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ကျဆုံးခဲ့
ရတဲ့နေ့ (အာဇာနည်နေ့)မို့လို့ အထိမ်းအမှတ် ဥသြဆွဲတာပေါ့”
အဲဒီလိုဥသြတွေဆွဲပြီး ဘာလုပ်ကြလဲမေးကြည့်တော့ အာဇာနည်အထိမ်းအမှတ်
ကျောက်တိုင်တွေမှာ ချီတက် စီတန်းပြီ လွမ်းသူပန်းခွေချ၊ အလေးပြုကြတာလို့
သိလိုက်ရတယ်။ အထိမ်းအမှတ် ကုသိုလ်ပြု အမျှပေးဝေတဲ့ အနေနဲ့ ဆွမ်းကပ်
နောင်နှစ်အနည်းငယ်အကြာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကျောင်းသားဘ၀
ရောက်တော့ ကျောင်းဝတ်စုံ(အဖြူ၊အစိမ်း)လေးနဲ့ ချီတက်အလေးပြုခွင့်
အဲဒီနေ့ကို ကျွန်တော်တစ်သက် ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်ပါဘူး။
( ဗိုလ်ချုပ်နှင့် တစ်ကွ နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူအားလုံးကို
အစဉ်လေးစား ဂုဏ်ယူ ဦးညွှတ်လျှက်)
About Ko chogyi
Ko chogyi has written 24 post in this blog.
View all posts by Ko chogyi →	Blog
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: မှန်၏ ကိုပီချိုခင်ဗျား..
ဥသြသံ မကြားရတော့တောတော့ တစ်မျိုး စိတ်မကောင်းသလိုပဲဗျား
သားဦးမြေးဦး၊ ၀မ်းတွင်းရူး says: အေးဗျာ ကျနော့်အသက်(၁၄-၁၅)လောက်ထိကို ကြားဖူးပါသေးတယ်။
နောက်ပိုင်း စစ်အာဏာရှင်တွေက အမေ မေ့အောင်လုပ်လိုက်ကြတာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 757
P chogyi says: အစိုးရအသစ် လက်ထက်မှာ ပြန်ပြီး
ဦးဆန်းဝင်းတို့ တစ်ခါတည်းတင်ပြပေးရင် ဖြစ်နိုင်မှာပါ။
Comments By Postစည်တော်ကြီး - ko pauk mandalay - ဦးဦးပါလေရာစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - uncle gyi - ဦးဦးပါလေရာလူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး - ဦးဦးပါလေရာ - padonmarပုညကြိယာဆယ်ပါး - kyaw hteik - padonmarဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - ဦးဦးပါလေရာ - ဦးဦးပါလေရာနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - uncle gyi - BMTM Mdyလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - padonmar - KZစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - padonmar - padonmarမွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - ကထူးဆန်း - ကထူးဆန်းစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - garuda - kai“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - padonmar - nicolus agralမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - padauk moe - Nay Chi``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - padonmar - BMTM Mdyခရီးသည်လေးသို့ - marblecommet - မောင် ပေအဟံ ပထမံ - Ko chogyi - padonmarဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - padonmar - San Hla Gyiဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - padonmar - မဟာရာဇာ အံစာတုံး၎ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - TNAဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - cobra - မောင် ပေအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - မောင် ပေ - pazflorEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70581 Kyats )naywoonni (67475 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62187 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59436 Kyats )MaMa (58031 Kyats )Top Posts & Pagesစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး )